Ashley Tisdale ane nhumbu nemwana wekutanga - ona ziviso yake - Nhau
Kuru Macelebs Varaidzo Style Nhau
Ashley Tisdale ane nhumbu nemwana wekutanga - ona ziviso yake
Ashley Tisdale ane iyo mai kupenya!
Musi waSeptember 17, iyo 'High School Musical' nyeredzi yakazivisa kuti iri kutarisira mwana wayo wekutanga nemurume Christopher French.
Tsamba yakagovaniswa naAshley Tisdale (@ashleytisdale) pana Sep 17, 2020 na8: 00 am PDT
gavin rossdale uye blake shelton
Vaviri ava vakagovana mifananidzo yemwana waAshley bump pa Instagram. Mumifananidzo, amai-vanofanirwa kupa nguo chena pavanenge vakabata mwana wavo bump. Ivo vaviri vakatumirawo mifananidzo kune avo Instagram Nhau vachisimbisa nhau.
'Mudiki munzira,' Christopher akanyora. Mutsamba yakafanana, Ashley akati Christopher, waakaroora munaGunyana 2014, ndiye 'anonyanya kupisa mwana baba.'
wissam al mana ane makore mangani
Vazhinji A-runyorwa nyeredzi dzakadururwa munhau dzevaviri dzinofara nekutumira zvirevo zvakanaka pane yemuiti Instagram peji
Chiziviso checheche chinouya pasingasviki mavhiki maviri vaviri vacho vapemberera gore ravo rechitanhatu remuchato.
Wow I can't believe we have been married 6 years? !! Nguva inofamba. Ndinoyeuka ndichiva nekutya kukuru miniti yatakaungana nekuti ndaisatenda kuti makandibata sei. Ndakanga ndisati ndambobatwa saizvozvo. Asi ini ndakarega ndichivimba nemoyo wangu uye 8 mwedzi gare gare takanga tiri vaviri vevana vanopenga vakabatanidzwa. Chris iwe zvechokwadi wakandiitira irinani vhezheni yangu nekuti unoramba uchindikurudzira mazuva ese. Moyo wako wakachena, iwe ungaita chero chinhu kuti undifadze, kuburikidza nekukwira nekudzika iwe ndiwe dombo rangu rakasimba. Ndinotenda chaizvo kuti ndave mukadzi wako. Ndinokuda uye mushure menguva yese iyi ini ndichiri mamuri… ps iyo yekupedzisira pikicha ndiyo yandinofarira @cmfrench
mariah carey pane lady gaga
Chinyorwa chakagovaniswa na Ashley Tisdale (@ashleytisdale) pana Sep 8, 2020 pa8: 02 am PDT
'Wow handikwanise kutenda kuti taroora 6 makore? !! Nguva inofamba, 'Ashley akarondedzera akateedzana mafoto emuchato munaGunyana. Ndakanga ndisati ndambobatwa saizvozvo. Asi ini ndakarega ndichivimba nemoyo wangu uye 8 mwedzi gare gare takanga tiri vaviri vevana vanopenga vakabatanidzwa. '
'Chris iwe zvechokwadi wakandiitira iro riri nani vhezheni yangu nekuti unoramba uchindikurudzira mazuva ese. Moyo wako wakachena, iwe ungaita chero chinhu kuti ufare, kuburikidza nekukwira nekudzika iwe ndiwe dombo rangu rakasimba, 'akaenderera mberi. 'Ndinotenda chaizvo kuti ndave mukadzi wako. Ndinokuda uye mushure menguva yese iyi ndichiri mukati mako. '
Demi Lovato akamhanyira kuchipatara nekuda kwe heroin overdose: Report
Wendy Williams anotsigira Kanye West 'haina hutano'
ane makore mangani bo derek naJohn corbett
ko matt damon vatamira kuaustralia
ndiani lily james akaroora
stella maxwell kristen mutariri asina kupfeka
zvichangoburwa nhau ku miranda lambert